Barca Oo Doonaysa Laf-dhabarta Liverpool, Man United Oo Ku Qabsatay Arsenal Difaacii Ay Qarka U Saarnayd Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Maanta Oo Jimce Ah - Gool24.Net
Barca Oo Doonaysa Laf-dhabarta Liverpool, Man United Oo Ku Qabsatay Arsenal Difaacii Ay Qarka U Saarnayd Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Maanta Oo Jimce Ah
Tababaraha cusub ee Barcelona ee Ronald Koeman wuxuu doonayaa inuu kooxdiisa keensado xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Liverpool iyo xulka qaranka Netherlands ee Georginio Wijandlum oo 29 jir ah. (Algemeen Dagblad)
Difaaca Lille iyo xulka Brazil ee Gabriel Magalhaes oo 22 jir ah, wuxuu dib u dhigay go’aan qaadashadiisa ku waajahan Arsenal, kaddib markii ay soo baxday in xilli dambe ay Manchester United dalab soo gudbisay. (Telegraph)
United waxay ka talo-baxday heshiis amaah ahaa oo ay Juventus kaga doonaysay garabka reer Brazil ee Douglas Costa oo 29 jir ah, taas beddelkeedana waxay u dhaqaaqaysaa weeraryahanka reer Wales ee David Brook oo ah 23 jir u ciyaara Bournemouth. (Manchester Evening News)
Tottenham Hotspur waxay qorshaynaysaa inay u dhaqaaqdo heshiis ay la gasho 22 jirka Arsenal ee Ainsley Maitland-Niles oo boosas badan ka ciyaara, kaas Mikel Arteta uu door bidayo inuu ka diro Emirates. (Mail)
Tababaraha Liverpool, Jurgen Klopp waxa uu culayska saarayaa sidii uu Bayern Munich ugala soo saxeexan lahaa kubbad-sameeyaha reer Brazil ee Thiago Alcantara oo lagu helayo lacag dhan £30 milyan oo Gini. Dhibaatada dhaqaale ee ay kooxdiisu ka cabanayso ayuu iska dhego tirayaa Klopp, waxaanu doonayaa in loo keeno laacibkan. (Independent)
Paris Saint-Germain waxay dusha kala socotaa xaaladda difaaca Manchester United iyo xulka qaranka Portugal ee Diogo Dalot oo 21 jir ah. (O Jogo)
Brighton waxay iska diidday dalabkii saddexaad ee Leeds United ay ka gudbiso difaaca reer England ee Ben White, waxaanay ku adkaysanaysaa in 22 jirkani aanu iib ahayn. (Argus)
Wada-hadalladii u socday Manchester United iyo goolhayaha reer England ee Dean Henderson oo 23 jir ah ayaa heer gabogabo ah maraya. Heshiiska cusub ee uu saxeexi doono waxa la filayaa in toddobaadkii uu ku qaadan doono lacag dhan £100,000 Gini. (Sky Sports)
Difaaca Manchester United ee Chris Smalling oo 30 jir ah, wuxuu xiisaynayaa inuu si rasmi ah ugu biiro Roma oo uu xili ciyaareedkii hore amaah ugu ciyaaray. (La Gazzette dello Sport).
Alcantaara qarankiisu barazil maaheee halkaas iga hubiya